Rano eto an-tany: tena avy amin'ny vovoka eny amin'ny habakabaka ve izany?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Rano eto an-tany: tena avy amin'ny vovoka eny amin'ny habakabaka ve izany?
Vaovao Mafana • fanabeazana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny vovoka Space dia mitondra rano ho an'ny tany
Ao amin'ny gazety vaovao navoaka androany tao amin'ny gazety Nature Astronomia, ekipa mpikaroka avy any Angletera, Aostralia ary Amerika dia manoritsoritra ny fomba famakafakana vaovao momba ny asterôida tranainy iray milaza fa ny vovobony avy any ivelany dia nitondra rano ho any an-tany rehefa niforona ny planeta.
Ny rano ao anaty voa dia novokarin'ny habakabaka weathering, dingana iray izay nanova ny zavatra simikan'ny voamaina mba hamokarana molekiolan'ny rano ny poti-javatra voasaron'ny Masoandro fantatra amin'ny anarana hoe rivotry ny masoandro.
Ny fikarohana dia afaka mamaly ny fanontaniana hatry ny ela hoe taiza no nahazoan'ny Tany manankarena rano ny ranomasimbe izay mandrakotra ny 70 isan-jaton'ny velarantany - mihoatra lavitra noho ny planeta vato hafa rehetra ao amin'ny rafi-masoandrontsika. Mety hanampy ireo iraka habakabaka ho avy hahita loharanon-drano amin'ny tontolo tsy misy rivotra.
Ny mpahay siansa momba ny planeta dia nanontany tena nandritra ny am-polony taona maro momba ny loharanon'ny ranomasimbe eto an-tany. Ny teoria iray dia milaza fa mety ho nitondra karazana vatolampy iray mitondra rano antsoina hoe asterôida karazana C rano ho an'ny planeta amin'ny dingana farany amin'ny fananganana azy 4.6 miliara taona lasa izay.
Mba hitsapana an'io teoria io, ny mpahay siansa dia efa nandinika ny 'fingerprint' isotopika amin'ny asteroids karazana C izay nianjera tamin'ny tany ho toy ny meteorites chondrite karbônina manankarena rano. Raha mifanandrify amin'ny rano an-tanety ny tahan'ny hidrôzenina sy ny deuterium ao amin'ny rano tainkintana, dia mety hanatsoaka hevitra ny mpahay siansa fa ny meteorita karazana C no loharano azo inoana.
Tsy dia mazava loatra ny vokatra azo. Na dia nifanaraka tamin'ny ranon'ny Tany aza ny dian-tanana deuterium/hydrogène manankarena rano sasany, dia maro no tsy nitovy. Amin'ny ankapobeny, tsy nifanaraka tamin'ny rano hita ao amin'ny lamba sy ny ranomasimbe ny tany. Fa kosa, ny tany dia manana rantsantanana isotopika hafa, somary maivana kokoa.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha tsy maintsy avy amin'ny meteorites karazana C ny sasany amin'ny ranon'ny Tany, dia tsy maintsy nahazo rano avy amin'ny loharanom-pahazavana isotopika iray, fara fahakeliny, izay nipoitra tany an-toeran-kafa tao amin'ny Rafitra Solar.
Ny ekipan'ny Oniversiten'i Glasgow notarihan'ny ekipan'ny Anjerimanontolon'i Glasgow dia nampiasa dingana famakafakana manara-penitra antsoina hoe tomography probe atomika mba handinihana ireo santionany avy amin'ny karazana vatolampy hafa fantatra amin'ny anarana hoe asterôida karazana S, izay mihodina akaiky kokoa ny masoandro noho ny karazana C. Ny santionany nodinihin'izy ireo dia avy amin'ny asterôida antsoina hoe Itokawa, izay nangonin'ny mpanadihady habakabaka Japoney Hayabusa ary niverina teto an-tany tamin'ny 2010.
Atom probe tomography dia nahafahan'ny ekipa nandrefy ny firafitry ny voamaina atoma iray isaky ny mandeha sy mamantatra ny molekiola rano tsirairay. Ny fikarohana nataon'izy ireo dia mampiseho fa nisy rano be dia be novokarina teo ambanin'ny velaran'ny vovobony avy ao Itokawa tamin'ny alàlan'ny toetr'andro.
Toerana feno vovoka ny rafi-masoandro tany am-boalohany, ka manome rano betsaka azo amboarina eo ambanin'ny vovon-tsavony entin'ny habakabaka. Ity vovoka be rano ity, hoy ny mpikaroka, dia mety ho nilatsaka tamin'ny tany tany am-boalohany niaraka tamin'ny asterôida karazana C ho ampahany amin'ny fandefasana ny ranomasimbe eto an-tany.
Dr Luke Daly, ao amin'ny Oniversiten'i Glasgow's School of Geographical and Earth Sciences, no lehiben'ny mpanoratra. Hoy ny Dr Daly: “Ny rivotry ny masoandro dia renirano misy hidrôzenina sy hélium ny ankamaroany izay mikoriana tsy tapaka avy amin'ny Masoandro mankany amin'ny habakabaka. Rehefa midona amin'ny tany tsy misy rivotra toy ny asterôida na vovobony eny amin'ny habakabaka ireo ion-hydrogène ireo, dia miditra amin'ny nanometera am-polony vitsivitsy eo ambanin'ny tany izy ireo, izay mety hisy fiantraikany amin'ny zavatra simika ao amin'ny vatolampy. Rehefa mandeha ny fotoana dia afaka mamoaka atôma oksizenina ampy avy amin'ny fitaovana ao anaty vato ny fiantraikan'ny 'espace weathering' an'ny ion hydrogen mba hamoronana H.2O - rano - voafandrika ao anatin'ny mineraly amin'ny asteroid.
"Ny tena zava-dehibe, ity rano azo avy amin'ny rivotra avy amin'ny masoandro novokarin'ny rafi-masoandro voalohany ity dia maivana amin'ny fomba isotopika. Midika izany fa mety ho loharanon’ilay fitahirizana ranon’ny planeta tsy hita popoka ny vovo-bovoka madinika, izay voasesin’ny rivotry ny masoandro ary voasinton’ny Tany miforona, an’arivony tapitrisa taona lasa izay.”
Prof. Phil Bland, Profesora John Curtin malaza ao amin'ny Sekolin'ny Siansa momba ny Tany sy ny Planeta ao amin'ny Oniversite Curtin ary mpiara-manoratra ny gazety dia nilaza fa "Ny tomography probe atomika dia mamela antsika hijery amin'ny antsipiriany amin'ny antsipiriany ao anatin'ny 50 nanometers voalohany na mihoatra. ny vovobony ao Itokawa, izay mihodidina ny masoandro ao anatin'ny tsingerina 18 volana. Nahafahan’izy io nahita fa feno rano ampy io sombim-peon’ny habakabaka io, ka raha ampitomboinay izany, dia ho 20 litatra eo ho eo isaky ny metatra toratelo ny vato.”
Nanampy teny toy izao ny Pr. Michelle Thompson, mpiara-manoratra ao amin'ny Departemantan'ny Tany, Atmospheric, ary ny Siansa momba ny Planeta ao amin'ny Oniversiten'i Purdue: “Izany no karazana fandrefesana izay tsy ho vita raha tsy nisy io teknolojia miavaka io. Manome antsika fomba fijery miavaka ny amin'ny fomba ahafahan'ny vovobony madinika mitsingevana eny amin'ny habakabaka manampy antsika handanjalanja ireo boky momba ny firafitry ny ranon'ny tany, ary hanome antsika famantarana vaovao hanampy amin'ny famahana ny misterin'ny niaviany.
Nitandrina tsara ireo mpikaroka mba hahazoana antoka fa marina ny valin'ny fitsapana azy ireo, ka nanao andrana fanampiny niaraka tamin'ny loharano hafa mba hanamarinana ny valiny.
Nanampy ny Dr Daly hoe: "Ny rafitra tomografika atomika ao amin'ny Oniversiten'i Curtin dia kilasy manerantany, saingy tsy mbola nampiasaina mihitsy tamin'ny karazana famakafakana ny hydrogène nataontsika teto. Tianay ho azo antoka fa marina ny valiny hitanay. Natolotro ny valim-pifidianana vonjimaika tamin'ny fihaonambe momba ny Lunar and Planetary Science tamin'ny taona 2018, ary nanontany raha misy mpiara-miasa manatrika hanampy anay hanamarina ny fikarohanay amin'ny santionany manokana. Faly izahay fa ireo mpiara-miasa ao amin'ny NASA Johnson Space Center sy ny University of Hawai'i at Mānoa, Purdue, Virginia ary Northern Arizona Universities, Idaho ary Sandia laboratoara nasionaly dia nanolotra fanampiana. Nomen'izy ireo santionany mineraly mitovitovy amin'ny taratra amin'ny hélium sy deuterium fa tsy hidrôzenina izahay, ary avy amin'ny valin'ny fikarohana ataoma tamin'ireo akora ireo dia nazava haingana fa ny zavatra hitanay tao Itokawa dia avy any ivelany.
"Ny mpiara-miasa izay nanolotra ny fanohanan'izy ireo tamin'ity fikarohana ity dia tena ekipa nofinofy ho an'ny toetr'andro amin'ny habakabaka, noho izany dia tena faly izahay noho ny porofo voaangonay. Afaka manokatra varavarana ho amin’ny fahatakarana tsara kokoa ny endriky ny rafi-masoandro tany am-boalohany sy ny fomba niforonan’ny Tany sy ny ranomasina.”
Profesora John Bradley, ao amin'ny Anjerimanontolon'i Hawai'i ao Mānoa, Honolulu, mpiara-manoratra ny gazety, dia nanampy hoe: Vao folo taona lasa izay, ny fiheverana fa ny taratra rivotry ny masoandro dia mifandraika amin'ny niandohan'ny rano ao amin'ny rafi-masoandro. , izay tsy dia misy dikany loatra amin'ny ranomasimbe eto an-tany, dia ho notsenaina tamin'ny fisalasalana. Amin'ny fanehoana voalohany ny famokarana rano in-situ eny ambonin'ny asterôida iray, ny fandinihanay dia miorina amin'ny fitambaran'ny porofo miangona fa miteraka rano tokoa ny fifandraisan'ny rivotry ny masoandro amin'ny vovoka misy oksizenina.
"Koa satria ny vovoka be dia be manerana ny nebula masoandro talohan'ny nanombohan'ny fitomboan'ny planeta dia tsy azo ihodivirana ny taratra, ny rano vokarin'ity rafitra ity dia mifandray mivantana amin'ny niandohan'ny rano ao amin'ny rafitra planeta ary mety ho ny firafitry ny isotopika amin'ny ranomasimbe eto an-tany."
Ny tombantomban'izy ireo momba ny habetsahan'ny rano mety ho ao amin'ny habakabaka misy toetr'andro dia manoro hevitra ihany koa ny fomba ahafahan'ny mpikaroka habakabaka amin'ny hoavy manamboatra rano eny amin'ireo planeta toa maina indrindra.
Ny Profesora Hope Ishii mpiara-manoratra ao amin'ny Oniversiten'i Hawai'i ao Mānoa dia nilaza hoe: "Ny iray amin'ireo olana amin'ny fikarohana ny habakabaka amin'ny hoavy dia ny fomba hahitan'ny mpanamory sambon-danitra rano ampy mba hitazonana azy ireo ho velona sy hanatontosana ny asany nefa tsy mitondra izany amin'ny diany. .
“Mihevitra izahay fa mety ny mihevitra fa ny fizotry ny toetr'andro eny amin'ny habakabaka izay namorona ny rano tao Itokawa dia nitranga tamin'ny ambaratonga iray na hafa tany amin'ny tontolo tsy misy rivotra toa ny Volana na ny asteroid Vesta. Mety hidika izany fa mety ho afaka manodina rano vaovao avy amin'ny vovoka eny ambonin'ny planeta ireo mpikaroka habakabaka. Mampientam-po ny mieritreritra fa ny fizotry ny planeta dia afaka manampy amin'ny fanohanana ny fiainan'ny olombelona rehefa mipaka any an-dafin'ny Tany isika."
Nanampy i Dr Daly hoe: "Ny tetikasa Artemis NASA dia mikasa ny hametraka fototra maharitra amin'ny volana. Raha toa ka manana fitahirizana rano mitovy amin'izany avy amin'ny rivotry ny masoandro ny eny ambonin'ny volana amin'ity fikarohana ity ao Itokawa ity, dia mety ho loharanon-karena lehibe sy sarobidy hanampiana amin'ny fanatrarana izany tanjona izany.
Ny taratasin'ny ekipa, mitondra ny lohateny hoe 'Fandraisan'ny rivotra avy amin'ny masoandro ho an'ny ranomasin'ny tany', dia navoaka tao amin'ny Nature Astronomia.
Mpikaroka avy amin'ny University of Glasgow, Curtin University, University of Sydney, University of Oxford, University of Hawai'i at Mānoa, Natural History Museum, Idha National Laboratory, Lockheed Martin, Sandia National Laboratories, NASA Johnson Space Center, ny University of Virginia, Northern Arizona University ary ny Purdue University dia samy nandray anjara tamin'ny taratasy.